Kamaryut	|	Yangon Region
Ad Number S-6367730
Pauk Pauk Real Estate & General Services Close
တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိပါသည် ဇေယျာသီရိလမ်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် (18 X...
890 Lakh (Kyats)
Ad Number S-6357394
Ad Number S-6354024
Aye Chan Myay Real Estate Close
2 bed frames,2 open wardrobes,3 nos cupboards,2 nos aircon,storage water heater...
Ad Number S-6305724
KMYT 122 ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ၂ရပ်ကွက်တွင်...
အကျယ်(1700 Sqft) 3RC GYM Room Karaoke...
Ad Number S-6296608
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိပါသည် ရွှေထန်းပင် Condo
Ad Number S-6278218
လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန်ရှိပါသည် ကမာရွတ် မြကန်သာလမ်းသွယ်
ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် (70 X...
Ad Number S-6268744
(0.36 ဧက)အကျယ်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဟောင်း၊...
86,200 Lakh (Kyats)
Ad Number S-6370663
38,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-6370355
Aung Kabar Real Estate Agency Close
ကမာရွတ်မြို့ နယ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး ဆင်မလိုက်ဈေ...
Ad Number S-6369835
A1 အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် Close
ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် (တိုက်ရိုက်) အမြန် ရောင်းမည်။ သိန်း...
Ad Number S-6368758
ကမာရွတ်မြို့နယ်..၊ ဗဟိုလမ်းမ ပေါ်..၊ AYA ဘဏ်အနီးတွင်...
Ad Number S-6368721
Ad Number S-6368509
Sai Khung Noung Co.,Ltd. Close
Ad Number S-6367607
ကမာရွတ်မြို့ နယ် ပြည်လမ်းမအနီး ရိုးမရိပ်သာလမ်းရှိ (20x60...
Ad Number S-6366817
ကမာရွတ်မြို့နယ် Hiway Complex...
Ad Number S-6366612
ရွှေမောင်းသံ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း Close